Izindaba - Global polylactic acid (PLA) emakethe yemboni yesimo semakethe kanye nokuhlaziywa kwethemba lokuthuthuka ngo-2020, amathemba abanzi okufaka izicelo nokwanda okuqhubekayo komthamo wokukhiqiza
I-Polylactic acid (i-PLA) wuhlobo olusha lwezinto ezisuselwa kubio, ezisetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni izingubo, ekwakhiweni, kwezokwelapha nakwezempilo nakweminye imikhakha. Mayelana nokuhlinzekwa, umthamo wokukhiqiza womhlaba wonke we-polylactic acid uzoba cishe amathani angama-400,000 ngo-2020. Njengamanje, iNature Works yase-United States ingumkhiqizi omkhulu kunabo bonke emhlabeni, inamandla okukhiqiza angama-40%;
Ukukhiqizwa kwe-polylactic acid ezweni lami kusesencane. Ngokwesidingo, ngonyaka we-2019, imakethe ye-polylactic acid yomhlaba isifinyelele kwizigidi ezingama-660.8 zamadola aseMelika. Kulindeleke ukuthi imakethe yomhlaba wonke igcine isilinganiso esikhulayo sonyaka sokukhula kwama-7.5% phakathi konyaka we-2021-2026.
1. Amathemba okusebenzisa i-polylactic acid abanzi
I-Polylactic acid (i-PLA) wuhlobo olusha lwezinto ezisuselwa ku-bio ezine-biodegradability enhle, ukuhlangana kwezinto eziphilayo, ukuzinza kwe-thermal, ukumelana ne-solvent nokusebenza okulula. Isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izingubo, ekwakheni, nasekunakekelweni kwezempilo nakwezempilo kanye nokupakisha isikhwama setiyi. Ngenye yezicelo zokuqala zebhayoloji yokwenziwa emkhakheni wezinto zokwakha
2. Ngo-2020, amandla okukhiqiza omhlaba we-polylactic acid azoba cishe amathani angama-400,000
Njengamanje, njengempahla ebolayo eguquguqukayo ebushelelezi emvelweni, i-polylactic acid inethemba lokufaka isicelo esihle, futhi amandla okukhiqiza omhlaba ayaqhubeka nokwanda. Ngokwezibalo ezivela ku-European Bioplastics Association, ngo-2019, amandla okukhiqiza omhlaba wonke we-polylactic acid cishe angamathani angama-271,300; ngo-2020, amandla okukhiqiza azokhuphukela kumathani angama-394,800.
3. I-United States i- “Nature Works” ingumkhiqizi omkhulu kunabo bonke emhlabeni
Ngokombono womthamo wokukhiqiza, i-Nature Works yase-United States njengamanje ingumkhiqizi omkhulu we-polylactic acid emhlabeni. Ngo-2020, inamandla okukhiqiza minyaka yonke angamathani ayi-160,000 we-polylactic acid, ebala cishe ama-41% womthamo wokukhiqiza womhlaba wonke, olandelwa yiTotal Corbion yaseNetherlands. Umthamo wokukhiqiza ungamathani ayi-75,000, kanti amandla okukhiqiza enza cishe i-19%.
Ezweni lami, ukukhiqizwa kwe-polylactic acid kusesencane. Ayikho imigqa eminingi yokukhiqiza eyakhiwe yasetshenziswa, futhi eminingi yayo mincane ngezinga. Izinkampani ezinkulu zokukhiqiza zifaka phakathi iJilin COFCO, Hisun Bio, njll.
4. 2021-2026: Isilinganiso sonyaka sokukhula kwenhlanganisela emakethe sizofinyelela ku-7.5%
Njengohlobo olusha lwezinto ezonakalisayo nezilimaza imvelo, i-polylactic acid ibonakala ngokuba luhlaza, imvelo, iphephile futhi ayinabuthi, futhi inamathemba abanzi okusebenza. Ngokwezibalo ezivela ku-ReportLinker, ngo-2019, imakethe yomhlaba ye-polylactic acid ifinyelele ku-US $ 660.8 million. Ngokuya ngamathemba alo abanzi okusebenza, imakethe izogcina isilinganiso esikhulayo sonyaka sokukhula kwama-7.5% phakathi konyaka we-2021-2026, kuze kube ngu-2026.
UZhejiang Tiantai Jierong New Material Co., Ltd. uzibophezele ekusebenziseni i-pla embonini yesikhwama setiyi, enikeza abasebenzisi uhlobo olusha lwesikhwama setiye esingeyona enobuthi, esingenaphunga futhi esonakalisayo ukuthola isipiliyoni esihlukile sokuphuza itiye.